Andry Raobelina Miha mafy ny fanenjehana azy
Taorian’ireo olon’ny HVM teo aloha toa an-dry Mbola Rajaonah sy Claudine Razaimamonjy dia tsikaritra ho miha mafy indray ankehitriny ny fanenjehana eny anivona haino aman-jery sy tambazotra samihafa ny mpandraharaha Malagasy,
Valifaty politika Lasa fitaovam-piadiana ny fitsarana…
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nanaovan’ny Filohan’ny Antenimierandolohona Atoa Rivo Rakotovao ampamoaka momba ilay taratasy nalefana manampahefana avy ao amin’ny Fiadidian’ny Repoblika manome baiko ny PAC (Pôles Anti-Corruption)
Eric Rabeharisoa “Hampidi-doza ny fitondrana ny zava-misy”
Tsy fantatra be eny ihany ny tena fizotran’ity Coronavirus eto Madagasikara ity, hoy ny mpanao politika, Eric Rabeharisoa. Sarotra be ho an’ny mpitondra fanjakana ny mamoaka stratejia satria tsy fantany ny tena fipetrak’ilay izy.
Antoko Leader Fanilo “Tokony 45 fara fahakeliny ny isan’ny loholona”
Mbola antoko velona ny Leader Fanilo izay tarihin’ny filohany, Jean Max Rakotomamonjy, hoy i Eric Rabeharisoa sekretera jeneralin’ity antoko, ity.
Antoko PSD Nanolotra fanampiana ho an` ireo mpiasan` ny fahasalamana
Ny faran` ny herinandro lasa teo dia tonga nanolotra aro-vava miisa 300 ary "Gel désinfectant" 10 tavoahangy ho an'ny Hopitaly Vaovao Mahafaly any Mandritsara ny antoko PSD.
Nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tetsy Ivandry dia nanamafy ny masoivoho frantsay, Christophe Bouchard, fa Frantsa dia vonona hatrany hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin` ny firenena roa tonta mba hahafahana miaraka miatrika ireo fanambin` ny taonjato faha-21. “Hiverina hiha mafy ny fifandraisantsika rehefa milamina ny fahamehana ara-pahasalamana. Rehefa misokatra koa ny sisin-tany dia afaka mamerina amin` ny laoniny ireo tetikasa sy fifandraisana ao anatin` ny fifampitosikana”. Marihana fa tokony nialohan’ny datin’ny 26 jona teo no nivoahan’ny fehin-kevitra lehibe mahakasika ireo nosy malagasy ireo fa noho ny krizy ara-pahasalamana misy eran’izao tontolo izao dia tsy tanteraka izany. Ny volana martsa lasa teo mantsy no tokony nitohy tany Paris ny fifampiresahana eo anivon’ilay vaomiera iombonana iarahan’ny delagasionina avy amin’ny fanjakana frantsay sy malagasy, saingy nahemotra amin’ny fotoana tsy mbola fantatra. Ny volana jona lasa teo ihany koa dia nanomboka ny fanohanan’ireo vondrona iraisam-pirenena ny Fanjakana malagasy amin’ny fitakiana ireo Nosy Manodidina na ny îles Eparses tamin’ny alàlan’ny “video conférence” ny filankevitry ny minisitry eo anivon’ny CMO (Organe de Coopération en matière de politique, défense et de sécurité) ao amin’ny vondrona SADC. Raha tsiahivina dia tafiditra tao anatin’ny lahadiniky ny filankevitry ny minisitry eo anivon’ny CMO ao amin’ny SADC ny raharaha mahakasika ireto nosy kely malagasy ireto mbola bodoan’i Frantsa ireto dia satria nisy ny fampitan-teny na “note verbale” nalefan’ny ministeran’ny raharaham-bahiny malagasy any amin’io vondrona iraisam-pirenena io. Fampitan-teny izay mitsipaka ny fikàsan’ny governemanta frantsay hanangana “réserve naturelle nationale” ao amin’ny Nosy Sambatra na Îles Glorieuse. Manoloana izany rehetra izany moa dia mamporisika vahaolana iombonana amin` ny alalan` ny fifampiresahana momba ny Iles Eparses ny masoivoho frantsay, Christophe Bouchard.